Ntuli aka nke UNWTO nke Secretary General
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Ntuli aka nke UNWTO nke Secretary General
Akụkọ Bahrain na -agbasa • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mgbasa ozi maka ntuli aka UNWTO nke Secretary General (World Tourism Organisation) na-aga n'ihu ugbu a. O bu ihe nwute, mkparita uka jikọtara ya na usoro esemokwu nke puru iru otu n'ime ndi a, karie ma oburu na ebumnuche ha bu iru votu ngwa ngwa o kwere mee n'agbanyeghị agbanyeghị nkatọ a na-ahụkarị nke ndị bu ha ụzọ n'ọfịs n'ime afọ iri abụọ gara aga. na ọdịiche dị n'etiti ndị mmeri abụọ ahụ, nke anaghị anabata nlebara anya na mpụga ọkachamara pụrụ iche.
Otu n'ime aro ndị a kwesịrị nlebara anya dị ukwuu bụ nke ewepụtara Ọ Mai Al Khalifa iguzobe a Global Assistance Fund maka revival nke njem mgbe ọrịa na-efe efe.
Akụkụ ya gafere mpaghara njem nlegharị anya ma gosipụta ọhụụ nke nwere ike ịbụ ihe nlere maka ụlọ ọrụ mba ndị ọzọ. Usoro mmefu ego nke ụlọ ọrụ ndị a, ọkachasị UNESCO, dabere na onyinye mba ọ bụla, nke agbakwunyere ihe a na-akpọ onyinye afọ ofufo nwere ebe akọwapụtara. Ihe si na ya pụta bụ na ọrụ ndị nzukọ ahụ na-enweta ego site na usoro a naanị n'echiche sara mbara bụ akụkụ nke mmemme ogologo oge nke nzukọ a ebe ọ bụ na ha na-esitekarị na mkparịta ụka dị n'etiti ndị nyere onyinye na mba na-erite uru - usoro nke ọrụ nke nzukọ mba ụwa bụ nke nke onye na-etinye aka na ya, nke ruru oke n'ụzọ, ịnwe ahụmịhe bara uru yana ihu ọma dị na ntinye nke ọrụ ego.
Nkwupụta HE Al Khalifa na-egosipụtakwa ịdị mkpa nke njirimara mba ụwa nke nzukọ a, na-ebelata ọnọdụ enwere ike nke ndị na-enye onyinye. Ikike nke usoro ndị a dị ọtụtụ na ihe atụ nke onye edemede na-agbaso ruo oge ụfọdụ mere ka nke a doo anya. Na Central America, okike nke Mpaghara Mpaghara Maka Sayensị na Nkà na createdzụ nke sitere na onyinye sitere na mba ndị sonyere na-agbaso ruo oge ụfọdụ site n'inwe echiche nke iwusiwanye ike site na itinye ego site n'aka ndị nyere onyinye na ụlọ akụ na-akwado ego. Usoro dị otú a ga-eme ka ikike nkwekọrịta nke mba ndị a bawanye.
Mgbake na-ebute ọrịa bụ nsogbu enweghị ike ịhapụ naanị na mba ndị nwere ikike akụ na ụba ka ukwuu. Njikwa nke Enyemaka Enyemaka nke nwere ikike kwụ ọtọ yana nke mejupụtara atumatu nke nzukọ mba ụwa kpebiri bụ mmesi obi ike na ọdịmma ụwa ga-ekpebi mgbake.
Nke a abụghị naanị eziokwu maka UNWTO na UNESCO. Ihe ịma aka nke usoro United Nations ga-eche ihu n'afọ ndị na-abịanụ buru ibu. Ebumnuche iji nweta ebumnuche Sustainable Development 2030 ga-emerịrị ihe nketa nke nsogbu ahụ malitere n'afọ gara aga. Nke a ga-achọ usoro ọhụụ maka mmekorita, na nke HE Al Khalifa kwuru na ọ ga-atọ ụtọ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọrịa na-arịa ọrịa siri ike. Ihe omuma atu mbu nke batara n’uche bu FAO na UNICEF.
Nke a nwere ike ịpụta na Ego a chọrọ abụghị ngalaba. Maka nke a, anyị na-anabata mbata ahụ ma na-atụ anya na mmejuputa ya.
O doro anya na atụmatụ ịmepụta ego dị otú ahụ ga-eche nnukwu nsogbu. Ihe isi ike kachasi ike bụ na ndị na-enye onyinye buru ibu na-eche nsogbu ego ihu n'ihi nnukwu mmefu nke ọha na-achịkọta iji mebie mmetụta COVID-19. Alternativezọ ọzọ nwere ike ịgụnye ịchọ ntinye nke GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Ezigbo ihe atụ bụ mmalite nke UNESCO nke Global Alliance for Education na-aga nke ọma nke ndị dike Internetntanetị bụ ndị mmekọ. GAFA nwere ike inye nkwado ego na nke ọgụgụ isi.
M. El Tayeb nyekwara aka na edemede a.
Locghagharia UNWTO site na Madrid gaa Riyadh na-ekpuchi ...